मन घिसिङलाई सङ्कट : यस्तो छ कारण - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारमन घिसिङलाई सङ्कट : यस्तो छ कारण
हरेक चुनाउमा सुबास घिसिङ यस्तो निर्णय गर्थे कि सारा जनता छक्क पर्थे। कहिले बइकट कहिले बाइपासको इतिहास गोरामुमोको मात्र छ। मन घिसिङले उनको पिताजस्तो निर्णय गर्न नसके पनि यसपल्टको विधानसभा चुनाउमा गोरामुमोको निर्णयप्रति सबैको आँखा छ।
भर्खरै सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङका नेताहरु दिल्लीमा पैसा माग्न जानेगरेको खुलाएका थिए।
चुनाउ छेकमा मन घिसिङ दिल्ली पुगे। भाजपाका नेता एवं विधायक निरज जिम्बाले मन घिसिङको आन्तरिक चलखेललाई स्टाटस लेखेर सार्वजनिक गरिदिएका थिए। जिम्बाले सार्वजनिक नगरेको भए पहाडका जनताले मन घिसिङ दिल्ली पुगेको थाहा पाउँदैन थिए।
मन घिसिङ पैसा लिन दिल्ली गएका हुन्? यदि पैसा लिन गएका हुन् भने गोरामुमोले भाजपालाई समर्थन गर्नेछ। यदि पैसा लिन गएका होइनन् भने आफ्नै उम्मेदवार दिनेछन्।
मन घिसिङ दिल्ली त गएकै हुन्। किन गएका हुन् कसैलाई थाहा छैन।
यसैबीच मन घिसिङको एउटा विज्ञप्ति पनि आयो। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- एक इञ्च पनि पछि हट्ने छैनौं।
पैसाको बार्गेनिङबाट पछि नहट्ने हो कि, टिकटको बार्गेनिङबाट पछि नहट्ने हो कि, बङ्गालमा भाजपाको सरकार बने छैटौं अनुसूची दिनुपर्नेबारेको बार्गेनिङबाट पछि नहट्ने हो कि केही स्पष्ट थिएन।
केवल एक इञ्च नहट्ने भनेका थिए। यही कुराले नै स्पष्ट गरेको थियो, मन घिसिङले केही न केही पकाउँदैछन्।
तर भाजपाले आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार घोषणा गरिदियो। जिम्बा आधिकारिकरुपले भाजपाका कार्यकर्ता हुन्। बजगाईँ र शुभ प्रधान पछिल्लो समय भाजपामा पसेका हुन्। तीनैजना भाजपाकै उम्मेदवार दिएपछि गोरामुमोमा खैलाबैला मच्चियो।
शुरुमा मन घिसिङबाट कठोर विरोध गरेको विज्ञप्ती आयो। त्यसपछि निरज जिम्बाको वयान आयो। जिम्बाले गोरामुमो आफैसित रहेको जनाए। त्यसपछि घन्टाघन्टामा त्यो विज्ञप्ति एडिट भयो। विज्ञप्तिबाट विस्तारै कठोर विरोध भन्ने शब्द हरायो।
त्यसपछि जिम्बा त ठिक छ, तर बजगाईँ र शुभ प्रधान चाँही मान्दैनौं भन्ने विज्ञप्ति आयो। जिम्बालाई स्वीकारेको कारण त स्पष्ट छ, जिम्बा गोरामुमोले भाजपासित चलखेल गर्न तयार गरिएको एजेन्ट हुन्।
सोसल मिडियामा एउटा मुहिम चल्यो, अध्यक्ष मन घिसिङको जुन निर्णय हुन्छ, त्यसैलाई स्वीकार गर्ने। तर जिम्बालाई मन घिसिङले स्वीकारे तर गोरामुमो कार्यकर्ताहरूले स्वीकारेनन्। हिजो मन घिसिङको निर्णय शिरोपर गर्छु भन्ने गोरामुमो कार्यकर्ताहरूले जिम्बा हटाउ अजय एडवर्डलाई उम्मेदवार बनाउ भन्ने मुहिम चलायो।
खबर आउँदैछ, दार्जिलिङबाट अजय एडवर्डलाई गोरामुमोले उम्मेदवार बनाउने।
मन घिसिङ दिल्लीबाट फर्किएपछि गोरामुमो खेमा सन्तुष्ट छैन। के मन घिसिङले भाजपाले जे गऱ्यो त्यही स्वीकार्ने दवाब आफ्ना नेताहरूलाई दिँदैछन्? किन गोरामुमोभित्र यत्रो रडाको मच्चिरहेको छ?
गोरामुमोको यो रडाकोबाट केही कुरा बाहिरियो।
मन घिसिङको निर्णय गोरामुमोका नेता र कार्यकर्ताहरू मान्नेवाला छैनन्।
जुन हिसाबले भाजपाले गठबन्धनमा रहेको क्रामाकपा र गोरामुमोजस्तो क्षेत्रीय दललाई किनारामा राखेर केवल भाजपाकै उम्मेदवार दियो, त्यसले स्पष्ट पाऱ्यो, कि कसरी भाजपाले क्षेत्रीयतालाई नष्ट गर्छ।
ममता व्यानर्जीले पहाडलाई पहाडकै हालमा छोडिदिइन्। तर भाजपाले छोडेन। विमल गुरुङ, क्रामाकपाले आफ्नै उम्मेदवार दिएर 2019 मा भाजपाले पाएको भोट काटिसक्यो। त्यहीँमाथि उम्मेदवारको किचलोले कालेबुङका सागर पोखरेललगायत अन्यले पहाडमा भाजपालाई हराउने मुहिम शुरु गरिसकेको छ।
मौकावादीहरूलाई टिकट दिने र खटेर पार्टी बनाउनेहरूलाई किनारिकृत गर्ने राजु विष्टको हैकमवादी निर्णयसित पहाडको भाजपा खुसी छैन्। यो नाखुसको प्रभाव चुनाउमा पक्कै देखापर्ने हो। भाजपा आफैको कुनै बेस छैन। न त क्रामाकपा र गोरामुमोजस्तो दोस्रो बलियो पार्टीलाई टिकट नै दियो।
राजु विष्टले विस्तारै पहाडका पार्टीहरूलाई किनारिकृत गरेर आफ्नो वर्चस्व बनाउने रणनीति शुरु गरिसकेका छन्।
चुनाउमा व्यापार हुने घटना नौलो होइन। मन घिसिङ पनि त्यही व्यापारमा लागेको कारण गोरामुमोमा यस्तो रडाको मच्चिएको हो?
त्यहीँमाथि राजु विष्टले स्पष्ट भनिसकेकै छन्, जो नेता पनि दिल्ली जान्छन् पैसा माग्न जान्छन्। मन घिसिङ दिल्ली पुगेर फर्किएका छन्। पैसा मागेर आएका छन् भने गोरामुमोले उम्मेदवार दिँदैन र भाजपालाई समर्थन गर्छ। पैसा लिएर आएका छैन भने गोरामुमोले आफ्नै उम्मेदवार दिन्छ। विष्टको कुरा मान्ने हो भने यही कुरा प्रमाणित हुन्छ।
यदि गोरामुमोले आफ्नै उम्मेदवार दियो भने मान्नुपर्छ, गोरामुमो भाजपाको पपेट होइन। आफ्नै मेरुदण्डमा उभिएको दल हो। क्षेत्रीयता बचाउने दल हो। आफैमा भरोसा गर्ने दल हो।
2017 मा ममतालाई चिट्ठी लेखेको कारण, बङ्गालले दिएको डेभलोपमेन्ट बोर्ड थापेको कारण मन घिसिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिएको छ, यसपल्ट पनि यस्तै कुनै नयाँ दाग आङमा बोक्ने हुन् कि मन घिसिङले आफ्नो पितालेजस्तो कुनै निर्णय गर्ने हुन्, जनता नजर लगाएर बसेका छन्।